Ha Yaabin, Argagixisadu waa Laan Siyaasadda Dibadda ee Dalalka Qaar! – Radio Daljir
Oktoobar 23, 2017 1:12 g 0
Gumaysigu waa kala nooc. Dadka la gumaysto, nooc kastaba ha loo gumaysto e, ayana waa kala jaar, laakiin waxa ay ka simanyihiin aqoon xumo, caddaalad darro, faqri, iyo liidasho hoggaanka siyaasadda. Gumaystaha oo ka faa’iideysanaya intaas oo liidnimo waxa uu fashaa wadiiqooyin kala duwan oo uu ku fushado danihiisa siyaasadeed iyo dhaqaale, qaacidaduna mar kasta waa bulshada “qaybi oo xukun” ama haddii aan tusaalaha Soomaaliya raacno “qaybi oo yaysan isxukumin.”
Annaga oo dabajoogna qaacidada “qaybi oo yaysan isxukumin,” aan marka hore dib-u-jaleecno wadiiqooyinka diin fidinta ee waayahaan Soomaalida loogu soo gabado, oo aan abbaarno jidka koowaad. Mar waxaa jiray diinta Islaanka loo fidin jiray xag Alle. Mar waxaa jiray dadka diinta la bari jiray si jaahilnimada looga saaro. Mar waxaa jiray dadka diinta lagu xorayn jiray, duurka looga soo xerayn jiray, ama dowladnimada lagu bari jiray, si loo mideeyo, loona yareeyo tafaraaruqa bulshada. Qarnigaan danbe, dowladihii diinta lagu yiqiin ama diinta laga bartay iyo qaadista dariiqa koowaad ee diinta toosan, diin faafintu waxay ay u noqotay siyaasad silloon, waxa ayna faleen jid labaad.
Hadaba aan maanta u kuurgalno jidka silloon ee laga feer falay kii hore ee toosnaa. Maanta diin silloon oo aan ahayn tii Nabi Maxamed, xafiisyo ku leh wasaaradaha arrimaha dibadda iyo xafiisyada sirdoonka dalalka qaar, siiba kuwo Islaanimada caan ku ah, baa diintii afduubtay. Wasaaradaha arrimaha dibadda iyo xafiisyadooda sirdoonka waxaa laga dhex abaabulay laamo shaqadoodu tahay fidinta diinta, laakiin ah diin silloon, kana duwan tii Nabi Maxamed. Waa diin darawal looga dhigay ururo argagixiso, kuwaas oo loo isticmaalo fulinta danaha siyaasadeed ee hadba dalka hawsha wata (ama dalalka wada wata).
Faafinta diinta silloon waxa ay gashay booskii dibloomaasiyadda iyo wadaxaajoodka ee dowladaha adduunka. Maanta dalkii dan laga rabo (ama dowlad-nimadiisana lagu burburinayo diin ama dimoqraadiyad – waana laba silloon oo isbadbadala, haddii mid shaqayn waayana kan kale boorka laga jafo) ama dib-u-dhac lala rabo, dadkiisana loo arko kuwo jilicsan, dib-dhacsan, ama si sahlan loo indhasarcaadin karo, hoggaamiye la’aanna ay hayso, ama horeba loogu diiday hoggaamiye fiican oo fahmi kara khataraha jira iyo kuwo ku soo fooleh, waxaa laga adeejiyaa ururo argagixiso oo dhammaantood wata magac Islaan, dhammaantoodna wada leh xiriir hoose oo wada shaqayn, maaliyad aan go’in, iyo rasaas aan dhammaan, amaba ku hubaysan hub kii ugu casrisanaa, aanse la aqoon meel ay kala yimaadeen, iyo xeeb ama garoon laga soo dajiyey.
Haddii aad yaabtay weli ha yaaban. Haddii aadan yaabin, waxna aad ka warqabtid, ase aadan taaban karin, hareerahaaga fiiri. Tiri wixii dowlad KMG soo maray Soomaaliya. Daymo u lahoow wixii ballanqaad Soomaali loo sameeyey. Ha illaawin say ururada Islaanka ee Soomaaliya ku biloowdeen iyo goorta ay biloowdeen. Huggaamiyayaasha kooxaha Islaamiyiinta midmid u xasuuso, deedna raadi meesha mid walbaa wax ku soo bartay. Kuwaas haddii ay diinta wax ka yaqaaneen, fiiro u yeelo sida loo tuuray markii laga helay wixii laga rabay, booskoodana lagu badalay kuwo diinta sheegta laakiin aan aqoon diineed lahayn. Dib-u-jaleec oo xasuuso in marnaba siyaasaddooda iyo hawlgaladooduba aysan ahayn soo-booddo ee ay ahaayeen taxane qorshaysan, leh fulin habaysan, jaranjaro siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo aan marnaba dhammaan.
Dowladihii KMG ahaa, Maxkamadihii & Al-Shabaab
Xasuuso dowladdii Cabdullahi Yuusuf ee lagu burburiyey “Islaamiyiinta la heshii”, haddii kale booska bannee. Xasuuso Madaxweyne Shiikh Shariif oo Cabdullaahi Yuusuf lagu badalay, kana yimid ururkii Maxkamadaha Islaanka ee dhalay Alshabaabta maanta. Xasuuso Shiikh Shariif oo waagiisii Maxkamadaha wax kasta diyaar loola ahaa, la siiyey, lana garab-istaagay, laakiin markii uu Madaxweyne noqday isla dowladihii dhisay midba gees u leexday, kuwii ugu roonaa ee Islaanimada la wadaagay ayana ay ku xujeeyeen isla xujadii Cabdullaahi Yuusuf iyo “Islaamiyiinta la heshii!” Sida taariikhdu qorayso, Madaxweyne Shiikh Shariif asna laga soo sheegay, Shiikh Shariif markaas baa miyir, faham, sida loo isticmaalay, iyo waxa Soomaali lala damacsanyahay ugu horraysay, welina uu la aamusanyahay.
Ha illaawin hoggamiyasyaashii kale ee Maxkamadaha, siiba raggii hagayey dagaaladii lagu hoobtay ee Bandiiradley, sida Maxamed Siciid Atam. Xaggee bay qorshihii Alshabaab u sii rareen, ayagu se xaggee joogaan maanta, yaa se hadda la wareegay hoggaankii hawlgalada qorshaysan ee Waqooyiga Soomaaliya?
Ha yaabin, hana illaawin doorka raggii dagaaladii Maxkamadaha ee koonfurta Soomaaliya (“Addis Ababa baan salaadda ciidda ku soo tukaneynaa!”) hagayey ee hadda Xamar wada dhooban, iyo kuwii hiil iyo hoo, dhan dhaqaale, dhan kicin shacab, siyaasad, iyo dhan warbaahin Maxkamadaha iyo Al-Shabaab la garab ahaa, illaa dhammaantood har cad laga dhaqaaqay, qaarkood la laayey, qaar loo dhaartay, qaar kalena maanta hayaan mansab dowlo oo sare, meesha Al-Shabaab ay Al-Qaacida la midooday, lana midab noqotay.
Haah, oo nin walbaa dan buu lahaa, welina leeyahay, Soomaali kasta asna dariishad asaga u gaar ah buu wax ka arkayey, qaar badan ayaga oo aan ka warqabin baa la isticmaalay, qaar weli la isticmaalayaa, badankooduna welina moog in si silloon loo isticmaalay, welina loo isticmaalayo.
Saas oo kale dowladaha shisheeye ayana waa kala dano, dowlad walbana dan bay leedahay, danteeda baana mar kasta ka horraysa danta Soomaaliya (waaba haddii hoggaamiyaha iyo siyaasiga Soomaaliyeed uu wato dan dowlo iyo mid dadeed). Sidaas darteed, meeshii dan Soomaaliya la fulin lahaa, Soomaaliya waxay noqotay meel danta lagu kala badasho, iyo dowlado ajnabi oo ku kala xaajooda “haddii aad saas ii yeesho, anna saas baan kuu yeelayaa.” Hadde ogoow “saas” waa gorgortan iyo hawlo kale oo aan Soomaaliya khuseyn, laakiin ah hawlo iyo loolamo kale oo ka dhexeeya dowlado kale, laguna loolamayo dalal kale iyo masiir ummado kale.
Badanaa hoggaamiyaha iyo siyaasiga Soomaaliyeed waa mid moog gorgortanka siyaasadeed ee lagu dul dheelayo, haddii aysan moogayna waxaad mooddaa in aysan jawaab u hayn ama aysanba ka baaraandegin baratanka siyaasadeed ee adduunka maanta, aysanna hawlgelin aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ehelka u ah siyaasadda qallafsan ee dunida cusub.
Dan kala Badalasho
Dan walba oo lagu gorgortamayo fure bay leedahay, haddii kale dantaas gorgortan ma gasho. Furaha Soomaaliya maanta waxaa kala haysta laba qolo. Qolo Soomaaliya la jirta iyo qolo ka jirta. Isla qolyahaas qaar kamid ahi si siman bay u maalgashadaan Dowladda Soomaaliya (DFS) iyo Al-Shabaab. Taasna waxaa la dhihi karaa waa nooc caymis ah, lana cayminayo danta dowladdaas, macnaheeduna markaas noqonayo, “mar kasta ka fogoow khasaare siyaasadeed” ama xataa lagu hubinayo in DFS aysan marnaba guulaysan, mar kasta khayaano cusub loo maleego dowladda iyo laamaheeda kala duwan, si aysan dowladdu marnaba u gaarin hadafka guud ee bannaanka laga taageero, kaas oo ah in Soomaaliya noqoto dowlad xukun dowlo leh, oo cadowga Soomaaliya maalin cad meel saarto. (Abukar Arman: “Soomaaliya waxa maanta haysta iyo sida ay Soomaaliyi maanta ajaaniib magan ugu tahay si aad u fahamto waxaad sawirataa diyaarad-qaade dagaal oo aad u weyn. Waxaad kale oo sawirataa in madaxweynaha Soomaaliya uu asna dushaas sare ee diyaaraduhu ka duulaan uu saaranyahay, loona oggolyahay in uu hadba dhinaca uu rabo uu u ordo, sidii uu rabana u ordo, maxaa yeelay wixii uu dushaas sare ka sameeyo, orad iyo fadhi kuu rabo ha ahaado e, ma aha mid badali kara xawliga uu diyaarad-qaaduhu ku socdo ama jihada uu abbaarayo.”)
30 sano kudhawaad kabacdi haddii hoggaamiyaha (ama hoggaamiyayaasha) Soomaaliyeed uu weli intaas fahmi la’yahay, uu maalin kasta ku dhacayo isla dabinkii shalay, xildhibaanka, siyaasiga, iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaga weli iftiin ma u bidhaamay? Haddii ay wax fahameen se maxaa uga qorshe ah “siyaasiga khariban” ee dantiisa ma aha e dan kale iyo masiir ummadeed moog, maalin kastana intaas oo marxaladood asaga oo og weli la soo taagan “war reer hebel nooga hiilliya?”
Qaraxa Xamar iyo Siyaasadda Bariga Dhexe
Dhacda kasta oo siyaasadeed (iyo mid milateri) waxa ay leedahay hadaf. Ma jirto dhacdo iska dhacda oo jiho gooni ah iyo siyaasad gooni ah aan abbaarayn. Hadaba si loo ogaado faa’iidada siyaasadeed ee masiibadii Isgoyska Soobe (iyo qarax kasta oo dhaca), iyo cidda faa’iido ugu dhow, waa lagama maarmaan in la isweydiiyo su’aalaha soo socda:
Ma la hubaa in qaraxa ay Alshabaab ka danbaysay, maxaa se loo hayaa oo daliil dhab ah?
Bil ama bilo kahor maxaa ugu weynaa xasaraadka siyaasadeed ee dalka ka taagnaa?
Maadaama taariikhda dhow ee Soomaaliya markii ugu horraysay ay shacbiga Soomaaliyeed si aan kalahar lahayn u taageereen xukuumadda cusub ee Madaxweyne Farmaajo, welina u taagersanyihiin, yaa la dhihi karaa raalli kama aha jihada siyaasadeed ee xukuumadda Farmaajo hadda abbaarayso, ha ahaado cadow dalka jooga, mid xukuumadda ku jira, ama dal shisheeye?
Ma jiraa cadow aan Al-Shabaab ka ahayn oo muujiyey, hadaladoodana laga dheehan karay digniin ku socota xukuumadda, loogana digayo in ay siyaasadeeda gudo iyo dibad wax ka badasho?
Alshabaab maanta ma leedahay awood ay ku abaabusho, kuna fuliso qarax intaas le’eg? Haddii aysan lahayn, yaa garab ku siin kara?
Isweydiinta su’aalaha kore waa muhiim maxaa yeelay waxa ay tilmaan sugan naga siin karaan jihooyinka dagaalada maanta ka socda bariga dhexe iyo saameyntooda Soomaaliya. Maanka ku hay in labada aag ee Ciraaq iyo Siiriya hadda lagu kala adkaaday, gorgortankooda quwadaha dagaalka abuuray iyo kuwii damiyeyna hadda waa gabagabo, bilaha soo socdana waxaa la filayaa in labada dowladood ee Ciraaq iyo Siiriya ay si rasmi ah ula wareegaan dhammaan dhulka ka maqan gacanta dowladda. Ha illaawin, in suurtagalnimada arrinkaas ay dowladaha Iran iyo Ruushku mug weyn ku leeyihiin.
Hana illaawiin in markii ugu horraysay taariikhda cusub ay Iran qarka u saarantahay gabagabada jidka isku xiraya Tehraan iyo Beyruut.
Mar haddii hawlihii Bariga Dhexe ay gabagabo yihiin, laguna kala adkaaday aagagga dagaalka, Soomaaliya waxa ay ka dhigantahay aaggii ugu danbeeyey ee aan weli lagu kala adkaan. Sidaas darteed filanwaa ma aha in dagaalo kharaar oo lagu hoobto ay weli qorshaha ugu jiraan wasaaradaha arrimaha dibadda dalalka qaar iyo sirdoonkooda ayaga oo adeegsanaya maleeshiyaad Soomaali ah, magac kastaba ha ku dagaal galiyeen e ama ha la bexeen, xattaa haddii uu yahay dagaal lagu burburin doono maleeshiyaadkii horey loo abuuray iyo hoggaankooda.
Hadaba qaraxii lagu hoobtay ee shalay aragnay, oo barooranay, oo tacsiyo wada dirnay, oo “Soomaali waa midoowday” la yiri, laakiin haddii dagaalku uu hadda carcar horleh la imaanayo, maxaa nooga qorshe ah timaadada?
Saldhigyada Puntland & Somaliland
Dhanka waqooyiga Soomaaliya (Puntland iyo Somaliland), oo badanaa ka badbaaday dagaalada abaabulan ee Soomaaliya lagu soo jiheeyo, laakiin tallaalkii sumaysnaa ee “macdan baarista” kal hore loo xabaalay, hadda waa uu ugxan dhigay, oo labadii sano ee ugu danbaysey Al-Shabaab iyo ISIS waxa ay samaysteen saldhigyo waaweyn iyo deegaan ballaaran oo ay si toos ah iyo si dadbanba uga taliyaan, teedsan inta u dhexaysa deegaanka xeebta ee Berbera illaa iyo Bossaso, siiba saddex xagalka deegaanka Godmo Biyo Cas ee galbeedka Ceerigaabo, Ceerigaabo laftigeeda, illaa iyo xeebta Xiis.
Marka laga yimaado dhanka xeebta Xiis iyo Maydh, loo dego buuraha Calmodow ee Gobolka Sanaag, loona maro togga weyn ee Gurbar, iyo buuraha teedsan Berbera illaa iyo Badda Hindiya, Al-Shabaab waxa ay labadii sano ee la soo dhaafay saldhigyo ka samaysteen togga Gurbar, deegaanka Mashcaleed, Moon, Markad, Xidid, Cadcado, iyo Madarshoon.
Bishii la soo dhaafay ee Siteenbar oo kaliya waxa ay Al-shabaab dhufayso ka qoteen tuulada Moon ee Calmadow, xigtana bariga wadada Geeldoora. Lixdii bilood ee la soo dhaafay wax qarsoon ma aha in har iyo habeen uu socdo geeddi ballaaran oo Alshabaab, mid baabuur, awr, dameero, iyo lug joogto ah, oo ay ku degayaan dhammaan dhulka kor ku xusan ama ay mid cusub sahankiisa wadaan.
Saldhigyada Al-Shabaab ee Buuraha Calmadow waxaa ugu shisheysa Madarshoon, walloow ay ciidamada Puntland kal hore ka saareen deegaankaas, ayse hadda ku soo laabteen.
Inta u dhaxeysa Galgala illaa Bossaso waxaa difaac u jooga Ciidanka Difaaca Puntland laakiin ururka Al-Shabaab waxa uu weli wadaa weeraro joogto ah oo lagu wiiqayo difaaca Puntland, kii ugu danbeeyeyna ahaa kii Kontoroolka koowaad ee Bossaaso biloowgii bishaan Aktoobar.
Saldhigyada argagixisada ee ku teedsan ama ka agdhow buuraha silsilada Golis kuma eka Calmadow oo kaliya, oo waxaa hadda weheliya kuwa ururka Daacish oo sheegay in ay Al-Shabaab ka go’een, kuwaas oo ayana si dakhso ah saldhigyo ku yeeshay Buuraha Calmiskaad iyo Calbari, iyo waliba inta u dhexeysa Qandala iyo Ballidhidin.
Somaliland si cad bay u inkirtay in deegaankeeda haba yaraatee ay ka hawlgalaan ururka Al-Shabaab iyo kan Daacish (ISIS). Puntland waxa ay Somaliland si joogto ah ugu eedaysaa in bariga Somaliland ay si toos ah iyo si dadban uu ururka Al-Shabaab u maamulo, Hargeysa iyo Burco ay deegaan u yihiin xaasaska Al-Shabaab, sahaydu uga timaado isla deegaanka, ciidamaduna u badanyihiin kuwo u dashay beelaha dega inta u dhexaysa Burco illaa iyo Ceerigaabo.
Weli ha yaabin, oo adoon la yaabin aamuska maamuladu ay ka aamusanyihiin khatarta ku soo fooleh, isweydii “maamuladu maxaa ay ka damceen ilahooda dhaqaale iyo dekedaha Berbera iyo Bossaso oo aan waxba u jirin saldhigyada Alshabaab iyo Daacish?” Saas oo ay tahay iyo sida la wada ogsoonyahay, waxaa dekedaha Berbera iyo Bossaso bilo kahor la wareegay shirkadda P&O Ports (farac DP World) oo ay si toos ah u leedahay dowladda Dubai ee Imaaraadka Carabta.
Su’aalahaas iyo kuwo la mid ah baa maanta dadka deegaanku isweydiinayaan iyo waxa laga damacsanyahay difaaca ilaha dhaqaalaha oo hadda galay marxalad ka duwan tii hore.
Dhanka dowladda Puntland, ma qarsoona dagaalka socda iyo baaxadda midka hadda la qorshaynayo. Warar sugan oo Radio Daljir ka heshay deegaanada Alshabaab ay saldhigyada ka samaysateen ayaa noo xaqiijiyey in hadda uu socdo abaabul dowladeed oo baaxad leh, oo markii taariikhda ugu horraysay kaashanaya kan qabaa’ilada deegaanka.
Saas oo ay tahay, hadana waa muhiim in akhristuhu uu taariikhda dib-u-raaco oo mar kale isweydiiyo su’aalaha hoose:
Aawaye hoggaamiyayaashii qabaa’ilada deegaanka iyo dowladda Puntland markii hore iska horkeenay, markii danbena ku biiray Al-Shabaab? Kuwa weli nool ma dalkaa deegaan u ah mise dal shisheeye, dalkee se?
Dadka hadda hoggaamiya hawlgalada Al-Shabaab ee Waqooyiga Soomaaliya ayana xaggee ka yimaadeen, waa se maxay taariikhdoodii hore?
Aawaye kambaniyadii macdan baarista ee markii hore dowladda Puntland heshiis dhaqaale la saxiixay, ahaana salka mushkilada iska-hor-imaadka dowladda iyo dadka deegaanka? Miyey se shirkaduhu wateen qorshe ka baxsan kan dowladda Puntland aqbashay, laakiin dadka deegaanku ay diideen?
Dowladaha Puntland iyo Somaliland maxaa ugu qorshaysan haddii heshiisyada P&O Ports fuli waayaan, ama u fuli waayaan sidii loo qorsheeyey?
Soomaaliya miyuusan ka jirin liis danbiilayaal dagaal iyo kuwo argagixiso oo mar un maxkamad la soo taagi doono? Xataa haddii aan loo hayn awood cadaaladda lagu horkeeno, shacabka ma loo quuri waayey in loo daabaco magacyada danbiilayaasha Soomaaliyeed si ay taariikhda u galaan?
Xaggee Wax Iska Qabsan La’yihiin?
Adoon yaabin, rajobeelna aan noqon, ogoow khasaare kastaa waa mid dhanka kale faa’iido ku wata. Laakiin faa’iidadu waa mid kaa rabta hoggaan suubban, baadigoob, hal-abuur, shaqo badan, iyo waliba niyadsami. Imtixaankaas dhammaantiis hoggaamiyayaashii hore ee siyaasadda Soomaaliya waa mid ay ku wada dhaceen, laakiin sannadkan waa mid ka duwan kuwii hore. Waa mar e shacabku waa mid bislaaday, siyaasad ahaan iyo dad ahaanna aad moodid in qaraxii Xamar ee isgoyska Soobe uu sii mideeyey. Laakiin mideynta shacabku waa mid kaa rabta gacan ku hayn. Waa mar kale e, si shacabka loo mideeyo waa lagamamaarmaan in “siyaasiga khariban” ee furfurka iyo “tol-la’ay” la taagan meel la wada saaro.
Saas oo ay tahay, hadana su’aal kale baa iyana ah, “sida shacabka Soomaaliyeed u midoobay, hoggaanka siyaasadda ee Soomaaliya ayana ma u midoobi doonaan, oo miiska ma soo saari karaan hoggaamin cusub oo dadka sii midaysa, si markaas cadowga Soomaaliya ku soo duulay, mid gudaha iyo mid dibadba, iyo waliba siyaasiga khariban looga guulaysto?”
Saadaashu ma aha mid qurux badan. Waa mar e shirkii Kismaayo kabacdi, DFS iyo maamulada dalku waa kuwo sii kala fogaanaya, oo midba midka kale uu cadow u arko. Waa marka xiga e, xukuumadda Farmaajo ayana waa mid hadafkeeda siyaasadeed iyo shakiga laga qabo aan weli shacbka u sharrixin, maamuladana aan saaxiibo ku yeelan. Dhanka maamulada gadoodsan, ayagu ma aha kuwo mabda’ isugu yimid ee waa kuwo danta maanta oo kaliya ku midaysan, ayaguna aan israbin, horayna aan isku rabin. Ururka Al-Shabaab asaga warkiisaba daa, oo waxaa ka go’an in uu maamul kasta meeshiisa ugu tago, kuna bireeyo, waana mid maamul kasta ka wada hawgal milateri, mid siyaasadeed, iyo mid sirdoon. Saas oo ay tahay, DFS iyo maamulada dalka waxa kaliya oo maanta ay ka midaysan yihiin waa in Al-Shabaab tahay cadowgooda koowaad, laakiin illaa iyo hadda ma ay laha siyaasad, hoggaan, iyo iskaashi midaysan. Dhanka kale, Al-Shabaab waa mid leh hal mabda’, hal siyaasad, iyo hal hoggaan. Nasiibdarro, Soomaaliya maanta waa meel ninba ninka kale cadow looga dhigay, oo ninna uusan kan kale u arag Soomaali waalaalkiis oo ku dan ah.
Runtii saadaashu waa mid liidata!
Dhanka dowladaha cadowga, ayaga Soomaali oo dhan waa isugu mid, ma leh saaxiib joogto ah, laakiin waxa ay leeyihiin dan joogto ah, taas oo maanta ah in aysan Soomaaliya tashan, heshiin, isku soo dhawaan, ninba meel gooni ah lagula faqo, oo la sii kala fogeeyo. Guul bay taaganyihiin. Dhanka Soomaaliya, saadaasha Soomaalidu waa mid aad u liidata!
Weli lama joogo waqti la samro, ragna talo kama dhamaato. Sidaas darteed ayada oo hoggaamiyaha Soomaaliyeed (DFS iyo maamuladaba) garab la siinayo, lana toosinayo, maanta culaysku waxa uu saaranyahay xildhibaanka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed. Aqoonyahanku waa in uu Xildhibaanka (labada aqal iyo maamul goboleedyadaba) garbo u noqdaa, la taliyaa, la shaqeeyaa, waana in ay si wadajir ah dadkooda iyo dalkooda ugu hiilliyaan. Maanta shalay ma aha, oo maanta dalku laba aqal buu leeyahay (iyo aqalada dowlad goboleedyada). Waa in si joogto ah looga doodaa su’aalaha kore. Waa in aqoonyahanku jiheeyaa xildhibaanka. Waa in xildhibaanadu ka doodaan siyaasadaha taagan iyo su’aalaha qof kasta oo Soomaali ah maanta maankiisa ka guuxaya. Doodda aqalada siyaasaddu waa qayb weyn oo hoggaaminta kamid ah, dadka isku duubta, hay’adaha dowliga ah xoojisa, hoggaanka sarena (DFS iyo maamul goboleedyada) dhiirigalisa, markii ay qaldanyihiina qabata.
Haah oo waa in hogaamiyihu hoggaamiyaa, laakiin haggaamin kama marna in hay’adaha dowladdu ay waajibkooda gutaan, oo ay fuliyaan shaqooyinkii loo igmadey. Si ay taasi u suurtagasho waa in xirfadlaha Soomaaliyeed la hawlgaliyaa oo laga gudbaa qaraabokiilka iyo hawl-u-igmashada saaxiibka aan aqoonta ehel u ahayn, hormarna aan u bukin. Soomaaliya ajnabi kulama tartami kadho, cadowna iskagama difaaci karto saaxiib iyo ina-adeer aan hawl qaran-dhis aqoon durugsan u lahayn. Haddii shalay tusaale noo tahayna, maanta xildhibaanka Soomaaliyeed oo gacan ka helaya aqoonyahanka waa in uu waddani noqdo, gutaana waajibkiisa/keeda dastuuriga ah.
Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo maamulada Soomaaliya haddii awal madax-ka-nool lagu xaman jiray, maanta golayaasha shacabku badanaa waa wada taam, marka intooda hormar u hamuun qabtaa, fahamsan khataraha jira, waa in ay dadka iyo dalka u hiiliyaan, doodaha siyaasadda badiyaan, dadka iyo dalka jidka suubban ku jiheeyaan. Waa in laga gudbaa madax-ka-nool oo loo gudbaa talo-ku-nool.
Qormooyinka Daljir 52 Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20789